Mandady rariny ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Marary ny fiarahamonintsika, marary ny firenena. Ravan’ny tsy fahamarinana mahazo laka ny rariny sy hitsiny. Na dia niorim-paka teo amin’ny maha malagasy (kolontsaina, soatoavina, fiarahamonina) aza ny fandalana izany, dia tsy afa-nivelatra eo anatrehan’ny fiarahamonina ara-politika. Sarotra anefa ny hahita politika afaka manangana fanjakana ho an’ny firenena iray rehefa ny soatoavina iorenany no marefo.
Fony nanohitra mpanjana-tany ny razantsika dia nazava ny foto-kevitra nijoroana ary fantatra ny soatoavina narahina ahatratrarana ny tanjon’ny fahaleovan-tena. Fa rehefa azo ny fahaleovan-tena, 60 taona aty aoriana, dia ny voanjo mpanjanaka no lasa, fa ireo Gasy zanatany nahazo fahefana no naka ny toeran’ny vazaha na ara-politika na ara-toe-karena. Dia Malagasy ihany no voanjo eto amin’ny taniny sy ho an’ny mpiray tanindrazana. Marefo araka izany ny firenena ; tsy miarina ny toe-karena, ary voahosihosy ny rariny sy ny fahamarinana. Tsy afaka miaro ny tombontsoam-pirenena ny fahefam-bahoaka ary tsy misy firaisan-kina hikatsahana ny soa iombonana. Aiza ilay fanjakana natao hampanjaka ny rariny sy ny hitsiny ? Arakaraka ny nanalavirana ny tantaran’ny fahaleovan-tena ve no nahamaty momoka ny hambom-pom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana ?
Marary ny orinasa Kraomita Malagasy. Tonga tao daholo ny vahiny nitrandraka na Frantsay, na Sinoa, na Rosianina na Indianina, fa ny harem-pirenena mivoaka andro aman’alina, ny orin’asa mihamilentika, ny mpiasa mihamahantra. 11 volana tsy nandray karama. Tsy afa-nianatra ny taranaka. Nidi-trosa ny fianakaviana. Misy ny rava fananana sy fiainana, fa tsy mihontsona ny fanjakana. Nametraka tale vaovao rehefa tonga teo amin’ny fitondrana ny “orange”. Ny tany no nivoara-mena, fa ny zava-misy sy ny fanao tsy niova. Efa ho herintaona no napetraka ny tompon’andraikitra, nefa tsy mahita vahaolana.
Mitokona ny mpiasa mba handady rariny, fa herim-pamoretana no nitsena azy ireo ny faran’ny herinandro teo. Ny « banderole » nisy nanala antsokosoko na dia ara-dalàna aza ny fitakiana. « Ho lany ihany ny paiso ao an-kady dia nirotsaka koa i Botosalama ». Endriky ny firenena marary sy ny fitantanana tsy mahomby ny Kraomita Malagasy. Mbola « malagasy » aloha hatreto no anarany. Fa izay rehetra Malagasy dia tsy natao hahomby : ny JIRAMA- ny AIRMAD- ny SIRAMA – ny SOTEMA. Soa ihany fa lasa omby ny CLUB M, fa raha tsy izany dia KOBAMA koa. Aiza ilay hambom-pom-pirenena ? Tsy resaka matin-kambo fotsiny izany, fa mila fahaiza-mitantana, fahaiza-manao, fahaiza-mandrindra, fahaiza-mamorona, fahaiza-mikaroka… Mahantran’izany anefa ny politika hitantanana ny firenena.
Koa raha tiana ny hanangana firenena vanona, raha irintsika ny hanana fanjakana mijoro ho an’ny firenena, tsy maintsy atao vain-dohan-draharahan’ny fanjakana ny fanorenana ny rariny. Zavatra roa no takian’izany, fitantanana ny politikam-pirenena ho toy ny orinasa, ary orinasa mikendry ny soa iombonana. Ny zavatra lalovan’ny orinasa Kraoma sy ny mpiasany dia azo itarafana ny fiainam-pirenena. Vokany : herim-pamoretana no ifampiresahana ary jadona ny fanamparam-pahefana. Dia be ny hitsako tsy misy amin’izany !
Mila dinihana eto amin’ny firenena ny fametrahana ny « mécanisme de solidarité » ho an’ny fanarenam-pirenena, izany hoe, ny fifamatoran’ny fitsinjaram-pahefana amin’ny fiharian-karena sy ny fitsinjarana ara-drariny ny harena mankamin’ireo fiahiana ara-tsosialy no firaisan-kina vaovao hanandratra ny ampitso. Raha tanteraka izany, vao ho foana ny kely tsy mba mamindro ampanjakaina ankehitriny.
Matoan-dahatsoratra : Mitombo ny olana, ary ny vahaolana ? - il y a 4 jours
Matoan-dahatsoratra : Tambajotra mafia, manondrana harem-pirenena ! - il y a 11 jours